दुई महिनायता ओलीले कांग्रेसविरुद्ध एक शब्द पनि नबोल्नु ‘अर्थपूर्ण’ - Sankalpa Khabar
1. दलको नेताको हैसियतमा प्रचण्डलाई बोल्न दिइए ओली पक्षले प्रतिनिधिसभा सुरुमै अवरुद्ध पार्ने
4. कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी महिला नेतृत्व
5. प्रचण्डलाई ठूलो झट्का, संसद्ले चिनेन संसदीय दलको नेता
6. सर्वोच्चले भन्यो– एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग पार्टी
दुई महिनायता ओलीले कांग्रेसविरुद्ध एक शब्द पनि नबोल्नु ‘अर्थपूर्ण’
९ फाल्गुन १२:१९
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिसम्म असहिष्णु र अराजक भएर प्रस्तुत हुन थालेका छन् कि सार्वजनिक कार्यक्रममा के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने सबै होस गुमाउन थालेका छन् ।
आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेताहरूलाई त उनले हरेक दिनजसो गालीगलौज र आरोप लगाइरहेका छन् । राज्यका दोस्रो र पाँचौं वरीयताका नेतालाई समेत उनले छाडेका छैनन् । शनिबार उनले विराटनगरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध बोले । जबकि वरीयतामा उपराष्ट्रपति पुन प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि छन् । आफूले गरेको निर्णयविरुद्ध आलोचना गर्ने जोसुकै पनि अहिले ओलीको निसानामा पर्ने गरेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, ओलीले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई समेत धम्की र चेतावनी दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई धम्की र चेतावनी दिनुले हामीले कस्तो प्रधानमन्त्रीलाई रोज्यौं भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।
बहालवाला प्रधानमन्त्री नै अदालतको निर्णय मान्दिनँ, आन्दोलनमा जान्छु भनेर भन्छ भने उसले देशलाई संविधान र कानुनअनुसार चलाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री कसैलाई पनि आमसभामा उडाउन छाडेका छैनन् । जबकि सबैजना नेकपाकै नेताहरू हुन् । हिजो ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ती सबैले काँध थापेकै हुन् ।
यतिवेला सबैभन्दा रहस्यमय चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसविरुद्ध एक शब्द पनि उच्चारण नगर्नुलाई मानिएको छ । जबकि ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस आन्दोलनमै छ । कांग्रेसका नेताहरूले दिनहुँ ओलीविरुद्ध कडा आलोचना गरिरहेका छन् । तर, पनि ओली एक शब्द पनि कांग्रेस र सो पार्टीका नेताविरुद्ध बोल्दैनन् ।
निर्वाचनका बेला र प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले कुनै दिन पनि कांग्रेस र सो पार्टीका नेताहरूलाई गाली नगरेको भन्ने थिएन । जब पार्टीभित्रैबाट उनी असुरक्षित बन्न थाले र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पुगे तब ओलीको बोली कांग्रेसविरुद्ध बन्द भएको छ ।
ओलीको कांग्रेसविरुद्धको मौनतालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले लामो समयसम्म राजनीतिक सहकार्यका रूपमा बुझेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयमा कांग्रेसले सशक्त आन्दोलन गर्न नचाहनुको अर्थ पनि त्यही हुन सक्ने बुझाइ छ ।
विप्लव समूहको वार्ता टोली संयोजक खड्ग विश्वकर्मा
१८ फाल्गुन १३:३५
सर्वोच्च अदालतको फैसला : नेकपा ऋषिराम कट्टेलको, ओली–प्रचण्डको नेकपा…
२३ फाल्गुन १५:००
संसदीय दलको नेताबाट ओली र उपनेताबाट नेम्वाङलाई हटाउने दाहाल–नेपाल…
१९ फाल्गुन १५:३३
विप्लव समूहका नेताकार्यकर्ता रिहाइ प्रक्रिया सुरु
२१ फाल्गुन १४:०८
नेता जोशीे अझै अचेत अवस्थामै
१७ फाल्गुन १८:१४
प्रचण्डलाई ठूलो झट्का, संसद्ले चिनेन संसदीय दलको नेता
२३ फाल्गुन १४:२८
‘चुनौती दिने रोजाइ लेउ’ नाराको साथ आज १११औं अन्तर्राष्ट्रिय…
२४ फाल्गुन ०७:३८